धुलिखेलमा ‘कोरोनाले सुत्केरीको मृत्यु’बारे मन्त्रालय प्रष्ट बोलेन « Loktantrapost
धुलिखेलमा ‘कोरोनाले सुत्केरीको मृत्यु’बारे मन्त्रालय प्रष्ट बोलेन
३ जेष्ठ २०७७, शनिबार १८:२२
मेचीनगर, ३ जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी महिलाको मृत्यु कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण भए नभएको स्पष्ट पार्न सकेन र मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले घटनाको अध्ययन भइरहेको र पछि यथार्थ बताइने जनाए ।
धुलिखेल अस्पतालमा २९ वर्षीया सुत्करीको उपचारका क्रममा बिहीबार निधन भएको थियो । अस्पतालकै ल्याबमा गरिएको पीसीआर टेस्टमा रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि सुत्केरीको मृत्यु कोरोनाबाट भएको अस्पतालले दावी गरेको छ ।
ती सुत्केरी २३ वैशाखमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नर्मल डेलिभरी गरेर उनी २५ गते घर फर्किएकी थिइन् । ज्वरो आउने र खोकी लाग्नुका साथै स्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि स्थानीय अस्पताल हुँदै धुलिखेल आइपुगेकी उनको बिहीबार निधन भयो ।
मन्त्रालयको टोली धुलिखेल गइसकेको र अस्पताल समेत सिल गरिसकिएको छ ।
सुत्केरी महिलाको मृत्युका सम्बन्धमा शनिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. देवकोटाले यस्तो बताए–
”सिन्धुपाल्चोक निवासी २९ वर्षीया महिला बैशाख २३ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो । २४ गते उहाँको नर्मल डेरीभरी भएको विवरण हामीलाई सो अस्पतालबाट प्राप्त भएको छ । र, उहाँ २५ गते डिस्चार्ज हुनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ सिन्धुपाल्चोक आफ्नो घर जानुभएको थियो ।
घर गइसकेपछि ज्वरो, स्वास प्रश्वासमा समस्या लगायतका शारीरिक समस्या भएपछि उहाँले स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराउनुभएको कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ । र, उहाँको स्थिति जटिल बन्दै जाँदा उहाँ धुलीखेल अस्पतालमा थप उपचारका लागि आउँदै गर्दा मृत्यु भएको खबर हामीले पाएका छौं ।
यस सम्बन्धमा हामीले थप विस्तृत विवरणहरु लिइरहेका छौं । र, कोभिड १९ सँग सम्बन्धित थप परीक्षणहरु भइरहेका छन् । यो परीक्षणहरुको र सम्पूर्ण विवरणहरु प्राप्त भइसकेपछि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा कोभिड १९ सँगको सम्बन्धित मृत्यु हो वा होइन भन्ने कुरा निर्क्योल गरेर प्रसारण गर्ने व्यहोरा सबैलाई म जानकारी गराउँछु ।”